यतिखेर भने मैले आफैसँग सोधेको प्रश्नको स्पष्ट उत्तर पाउन सकेकी छैन— छोरीको इच्छा अनुसार ढुक्क भएर उनले रोजेको मानविकी विधा नै पढाउन सक्ने ठाउँ कहाँ होला ? मेरो आमा मनले कल्पेको जस्तो उनको छनोट अनुसारको उदार र सिर्जनशील व्यक्ति बन्न मार्ग प्रदर्शन गर्ने वातावरण यो देशको कुन शैक्षिक केन्द्रसँग होला, जसले उनलाई आफ्नो कारखानाभित्र पस्ने ‘माल’ का रूपमा होइन, भविष्यको समाज निर्माता र कर्ताका रूपमा स्वागत गरोस् ? उनको कल्पनाको उडानलाई वास्तविक बनाइदिने पखेटा दिन सकोस् ? प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:००
उनीसँग एउटा विशेष सपना छ, आफ्नो कार्यकालसम्ममा नगरपालिकालाई छाउगोठमुक्त बनाउने । यो सपना पूरा गर्ने कार्ययोजना पनि छ उनीसँग । त्यसैअनुसार काम गर्दै पनि छिन् । तर यो सपना धेरै महँगो र चुनौतीले भरिएको छ । उनका योजना पूरा होऊन्, हामीले दिलैदेखि शुभकामना प्रकट गर्‍यौं । अब हिँड्ने तर्खर गर्नु थियो । मेरो मनको रंगशालामा तस्बिरमा मात्रै देखिएको खप्तड पाटनको विशाल भूमिको चित्र कुँदिरहेको थियो । मानौं मेरो एउटा गोडो त्यहीँ पुगिसकेको छ र अर्को एउटा मार्तडीमा । म भयंकर उत्साहित थिएँ । मार्तडी चिन्न विशेष सहयोग गर्ने साथी खडकले खप्तड जाने जिपको समेत व्यवस्था गरिदिएका थिए । उनीप्रतिको कृतज्ञताले मन भरिएको थियो तर भन्ने खास शब्द नपाएर म ट्वाँ परिरहेकी थिएँ । तै, केही त भनें । उदात्त हृदयको सदाशय र सहयोगमाथि कृतज्ञ हुनुपर्ने बेला मलाई जहिल्यै शब्दको संकट महसुस हुन्छ । यस पटक पनि यस्तै भयो ।